Iindaba- Kutheni le nto kunzima kakhulu ukuphinda usebenzise izinto zokuthambisa?
Kutheni le nto ukupakishwa kwezithambiso kunzima kangaka ukuphinda kusetyenziswe kwakhona?
Okwangoku, yi-14% kuphela yokupakishwa kweplastiki kwihlabathi liphela erisayikilishwe-yi-5% kuphela yezixhobo ezisetyenziswayo kwakhona ngenxa yenkunkuma ebangelwe yinkqubo yokuhlela nokurisayikilisha. Ukuphinda kusetyenziswe kwakhona ukuphakheja kobuhle kuhlala kunzima ngakumbi. UWingstrand ucacisa athi: “Uninzi lwempahla lwenziwe ngezinto ezixubeneyo, ke kunzima ukuphinda zisetyenziswe.” Impompo yentloko yenye yemizekelo eqhelekileyo, ihlala yenziwe ngeplastiki kunye nemithombo yealuminium. "Ezinye iipakeji zincinci kakhulu ukuba zinokufumana izinto eziluncedo."
U-Arnaud Meysselle, umlawuli olawulayo we-REN Clean Skincare, uphawule ukuba iinkampani zobuhle zinobunzima ekufumaneni isisombululo esifanelekileyo kuba izixhobo zokurisayikilisha zinokwahluka kakhulu kwihlabathi liphela. Ngelishwa, nokuba ukupakisha kungaphinda kwenziwe ntsha ngokupheleleyo, kungcono kuphela ngama-50% okuba iphinde iphinde iphinde isetyenziswe, utshilo kudliwanondlebe lweZoom nathi eLondon. Ke ngoko, uphawu lwebrand lutshintshile ukusuka kupakisho olunokuphinda lusebenze luye kwiphakheji yeplastiki ehlaziyiweyo. "Ubuncinci ungenzi iplastiki enyulu."
Ukutsho oko, i-REN Clean Skincare yaba luphawu lokuqala lokhathalelo lolusu ukufaka itekhnoloji ye-Infinity Recycling kwimveliso yayo etyikityiweyo ye-Evercalm Global Protection Day Cream, okuthetha ukuba ukupakisha kungaphinda kwenziwe kwakhona ngokufudumeza nangokucinezela. "Le plastiki iqulethe iipesenti ezingama-95 zerisayikilishi, kwaye iinkcukacha zayo kunye neempawu zayo azifani neeplastikhi zeentombi," ucacisile uMeysselle. Okona kubalulekileyo kukuba inokuphinda isetyenziswe kwakhona ngokungenammiselo. ” Okwangoku, uninzi lweeplastikhi zinokuphinda zisebenze kwakhona kube kanye okanye kabini.
Ewe ubuchwephesha obufana ne- "Infinity Recycling" busafuna ukupakishwa ukuze kungenwe kumaziko afanelekileyo ukuze iphinde isetyenziswe kwakhona. Iimpawu ezinje ngeKiehl's zithatha inyathelo lokuqala ekuqokeleleni ingqokelela yeenkqubo zokuphinda zisetyenziswe. "Enkosi ngenkxaso yabathengi bethu, siphinde saphinda sazisebenzisa i-11.2 yezigidi zeepakeji zemveliso kwihlabathi liphela ukusukela ngo-2009. Sizimisele ukuphinda sisebenzise ezinye iipakeji ezizizigidi ezili-11 ngowama-2025, utshilo umlawuli wehlabathi kaKiehl uLeonardo Chavez nge-imeyile evela eNew York.
Utshintsho oluncinci ebomini lunokunceda ukusombulula ingxaki yokurisayikilisha, njengokumisela inkunkuma ehlaziyiweyo kwigumbi lokuhlambela. "Ngokwesiqhelo, inkunkuma inye kuphela kwigumbi lokuhlambela, ngoko ke wonke umntu ubeka yonke inkunkuma ndawonye," utshilo uMeyselselle. "Sicinga ukuba kubalulekile ukukhuthaza wonke umntu ukuba asebenzise kwakhona kwigumbi lokuhlambela."
Ixesha Post: Nov-04-2020
Isithambisi sePowder sePowder kunye neSifter, Iziqulatho zeCream cosmetic, Cream Jars Izithambiso Packaging, Ihowuliseyili cream Cream Jar, Ibhotile emnyama yeGel Polish, Ijayi yeKhrimu yeLiso,